पृथ्वीको नजिकबाट गु”ज्रियो क्षु’द्र ग्र’ह, कसैले थाहा नै पाएनन् !!!! « गोर्खाली खबर डटकम
पृथ्वीको नजिकबाट गु”ज्रियो क्षु’द्र ग्र’ह, कसैले थाहा नै पाएनन् !!!!
काठमाण्डौ : पृथ्वीको नजिकबाट यस हप्ता पाँचवटा क्षुद्र ग्र’ह गु’ज्रनेछ । अमेरिकी अन्तरीक्ष एजेन्सी (नासा) ले यसबारे जानकारी दिएको हो । नासाका अनुसार गत हप्तामात्र एक क्षुद्र ग्र’ह पृथ्वी र चन्द्रमाको बीचबाट गुज्रेको थियो । वैज्ञानिकहरुले उक्त क्षु’द्र ग्रह’रलाई ट्रयाक गर्न चु’केका थिए । नासाले यस्तो ग’ल्तीले भविष्यमा मूल्य चु’काउन पर्न सक्ने पनि बताएको छ ।
पृथ्वीको नजिक भएर गु’ज्रने क्षुद्र’हरु मध्ये एकको आकार ४७ फिट र बाँकीको १३० देखि १८० फिटसम्म रहेको छ । यी क्षु’द्र ग्र’हरु पृथ्वीबाट आठ लाख ५९ हजार देखि ४१ लाख माइल टाढाबाट गुज्र’नेछ । यसबारे धेरै चि’न्ता लिन आवश्यक नभएको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् ।
तर, नासाका अनुसार गत ५ जुनमा एक क्षु’द्र ग्र’ह पृथ्वीबाट १ लाख ९० हजार माइलको दुरीबाट गु’ज्रेको थियो । यसको आकार ४ सय फिट थियो । वैज्ञानिकहरुका अनुसार ‘२०२० एलडी’ नाम दिइएको उक्त क्षु’द्र ग्रह पृथ्वी र चन्द्रमाबीचबाट गु’ज्रेको थियो । तर, ७ जुनसम्म वैज्ञानिकहरु बेखबर रहे । वैज्ञाहिरुले क्षु’द्र ग्र’ह ठूलो आकारको नभएको बताए पनि सन् २०१३ मा साइबेरियामा कहर बर्साएको चैलयाविस्क उल्कापिन्डभन्दा यो ठूलो रहेको थियो ।
खगोलविदका अनुसार १६४० फिट या सोभन्दा ठूलो क्षुद्रग्र’ह एक लाख ३० हजार वर्षमा एक पटक पृथ्वीसँग ठो’क्किने अनुमान गरिन्छ । १३ अप्रिल २०२९ मा ९९९४२ नाम दिइएको क्षु’द्र ग्र’ह पृथ्वीको निकै नजिक भएर गु’ज्रने छ । यो पृथ्वीसँग ठो’क्किन पनि सक्नेछ । यसले केही भूउपग्र’हलाई नो’क्सान पनि पुर्याउने सक्ने बताइएको छ । यस क्षुद्र ग्र’हको आकार ११ सय फिट रहेको छ ।
अर्को क्षुद्र ग्र’ह बेन्नूको आकार १६१० फिटको रहेको छ । यो सन् २१७५ मा पृथ्वीको नजिक भएर गुज्रनेछ । नासाका अनुसार काइनेटिक इम्प्याकटरको मद्दतले क्षुद्र ग्र’हलाई पृथ्वीको नजिक आउनभन्दा अघि नै नष्ट गरिनेछ ।यी क्षुद्र ग्र’हको बाटोमा भूउपग्र’ह पठाइनेछ । यसले उक्त क्षुद्र ग्र’हलाई न’ष्ट गरिदिनेछ ।
नेपालको सरकारी निकायले बनायो एक पटक चार्ज गर्दा ५० किलोमिटर गुड्ने विद्युतीय स्कुटर
नासाले यान पठाउने, जसले पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई १०,००० करोड रुपैयाँ दिन सक्छ !
ओहो !नेपालमै यस्तो प्रतिभा देखियो,मात्र १७ वर्षका युवाले बनाए उड्ने हेलिकप्टर
अभिनेता पल शाहविरुद्ध अर्को जाहेरी लिएर आफन्तसँग गैंडाकोट पुगिन् पीडित
२ साता अघि विवाह गरेर श्रीमान्को घर गएकी इन्जिनियर छोरीको जब मृत्युको खबर आयो, पोष्टमार्टम रिपोर्टले खुलायो यस्तो रहस्य